RASMI: Chelsea Oo Ku Dhawaaqday In Ay Heshiis Cusub Oo Waqti Dheer Ah Ka Saxiixatay Mid Ka Mid Ah Xidigaha Kooxdeeda Ugu Muhiimsan. - GOOL24.NET
RASMI: Chelsea Oo Ku Dhawaaqday In Ay Heshiis Cusub Oo Waqti Dheer Ah Ka Saxiixatay Mid Ka Mid Ah Xidigaha Kooxdeeda Ugu Muhiimsan.
December 4, 2018 Mahamoud Batalaale
Kooxda Chelsea ahaa hadda ku dhawaaqday in ay heshiis cusub ka saxiixatay mid ka mid ah ciyaartoyda kooxdeeda ugu muhiimsan. Chelsea ayaa wada qorshe ay ciyaartoyda kooxdeeda ugu muhiimsan ugu abaal marinayso heshiisyo cusub kadib wixii ku soo dhacay Thibaut Courtois oo ay awoodi wayday in markii uu heshiiskiisu dhacayay ay lacag aad u hoosaysa ugu fasaxday Real Madrid.
Chelsea ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay Pedro Rodriguez ka saxiixatay heshiis cusub laakiin waxay hadda si rasmi ah u shaaciyeen in difaaca muhiimada wayn leh ee Cesar Aplicueta uu qalinka ku duugay qandaraas cusub oo waqti dheer ah.
War rasmi ah oo ka soo baxay kooxda Chelsea oo loogu dhawaaqay qandaraaska cuusb ee Cesar Azpilicueta ayaa lagu yidhi: “Cesar Azpilicueta maanta waxa uu Chelsea u saxiixay qandaraas afar sanadood ah kaas oo Stamford Bridge ku hayn doona ilaa 2022. Difaacu waxa uu xili ciyaareedkan ahaa kabtankeena kulamadii Premier league, wuxuuna hadda laba kulan u jiraa in uu gaadho 300 kulan oo Chelsea ah”.
Cesar Azpilicueta ayaa noqon doona xidigii todobaad oo kaliya ee taariikhda Chelsea soo maray oo aan UK u dhalin ee gaadhi doona 300 kulan oo Blues ah isaga oo haddaba ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee uu Sarri ku shaqaynayo si la mid ah tababarayaashii ka horeeyay.
Markii uu heshiiska cusub qalinka ku duugay ayuu Cesar Azpilicueta dareenkeeda ka hadlay isaga oo farxad wayn muujiyay wuxuuna yidhi: “Xaqiiqdii waxaan ku faraxsanahay in aan sii dheereeyay joogtaankayga halkan Chelsea. Tan iyo markii aan imid waxaan dareemay farxad iyo masuuliyada kooxdan loogu ciyaaro, jamaahiirtaas iyo markasta oo aan garoonka soo galo waxaan isku dayaa waxayga ugu fiican”.
“Waxaan rajaynaya in ay jiri doonaan wax badan oo iman doona isla markaana aanu sii wadi doono in aanu Chelsea ku ilaakin karno halka ay leedahay” Ayuu Cesar Azpilicueta hadalkiisa sii raaciyay.
Agaasimaha ciyaaraha kooxda Chelsea ee Marina Granovskaia ayaa iyaduna dareenka kooxdeeda ee heshiiska cusub ee Azpilicueta ka hadashay waxayna tidhi: “Cesar waa mid ka mid ah ciyaartoydayada ugu waqtiga dheer, wuxuuna in uu fantastik yahay ku cadeeyay intii ka badnayd lixdii sanadood. Xirfadlenimadiisii iyo joogtayntiisii waqtigaas cidna labaad uma aha, wuxuuna u hormaray mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda ugu saamaynta badan”.
“Heshiiskan cusubi waxa uu Cesar u qaadi doonaa 10 xili ciyaareed oo Chelsea ah isla markaana waxaan rajaynayaa in afarta sanadood ee soo socda uu qayb muhiim ah ka noqon doono guushayada”. ayay sii raacisay hadalkeeda agaasimaha ciyaaraha Chlsea ee Marina Granovskaia